FADEEXAD: Waxay naga laaleen naasaha iyo dabadda! | Somaliska
Wargeyska Expressen ayaa soo bandhigay macluumaad muujinaya in Booliska Sweden ay shacabka ka qariyeen dhacdooyin foolxun oo dhalinyaro soo galooti ah ay kula keceen gabdho Swedish ah xili ay socotay xaflad musik. Arintaan ayaa dhacday sanadkii 2014/2015 taasoo ka dhacday xaflad lagu magacaabo “We are Stockholm”.
Wadanka halaga saaro dadka falkaan kukacay. Dhaqan xumadii wadamadoodi ayee halkaan la imaadeen. Waa ceeb. Dadkaan noocaan ah muslimka ayee ceebenayaan.
Asc walaalo yaal. Sheekadan waa sheekadii yaaleh waye dad dal islaam kayimiid ee lobahna in lagabarto wanaag oo iyagii xiraan wado waa wax laga naxo walaahi.laakiin Aniga waxeey ilatahay waxaas waxa kuqasbaay waa qamro ama man doriyo ee cabeen. Niman waa weyn oo naago raadis ah oo ima iska dhigaayo waye dadka waxaas sameeyey waxa dhihlaha qofkii waxas kukaco hala si iyo utvisa. Asc
Asc walaalo yaal. Sheekadan waa sheeko la yaableh waye dad dal islaam kayimiid ee lobahna in lagabarto wanaag oo iyagii xumaan wado waa wax laga naxo walaahi.laakiin Aniga waxeey ilatahay waxaas waxa kuqasbaay waa qamro ama man doriyo ee cabeen. Niman waa weyn oo naago raadis ah oo ima iska dhigaayo waye dadka waxaas sameeyey waxa dhihlaha qofkii waxas kukaco hala si iyo utvisa. Asc
Ma idinka ayaa garanaya dalka ay udashten kuwa gaystay dibta
Asc waa arin aad u xun haday jirto.
In ruux soo galooti ah sidaas u dhaqmo.ma aha mesha ay joogaan
Dalkooda mana ah iney sameeyaan xumaan meel kasta ay joogaan .waa in dhalinyarada dalka ku cusub loo shegaa nidaamka wadanka.
AAR 23 says:
War aniga intalee uma laynayay Finland. Ileen cabashada Jarmalka iyo Sweden weey heysataa dhibaatadan. booliska Finland sidaas oo kale waxay ku hayeen waa arin nagu cusub oo aan wali arag in la iska taataabto gabar wada iska maraysa waliba santarka Helsinki. boolisku waxa uu eedaynaya dhalinyarada soo gashay sanadkan oo raxan raxan u socoda.
January 11, 2016 at 18:01
wadamada islaamka naaga qawan lama arko sidaas darteed naagaha qaawan bay u adkaysan waayen iyagaa laqabsan sdoona markay mudo joogan
Dee waa carabtii aan arki jirin naag wadankoodii oo naago qawan dhex yimi mel carab soo gadhay ddhaqanxumo waa iman runtii
afgaantu waa wasakh waa dad muslima ka fog oo qamriga iyo wixiiba xum ee ilahay inga reebay ayay ku dhaqman
Waa dhalinyaro ha iska baashaalaan maxaa laga rabaa.
Aniga arag tidey Qof ka muslin ka ah waxa laga raba inu ilali yo rariskisa waan
Soo qaxney wanaga dinta in lanoga day do inan ku dadalno Insha Allah!